"बिदेशी ज्वाईलाई किन १५ वर्षपछि नागरिकता दिने ?":- सांसद बडु – Kalika News
“बिदेशी ज्वाईलाई किन १५ वर्षपछि नागरिकता दिने ?”:- सांसद बडु
२८ भाद्र २०७६, शनिबार १०:५९ , मा प्रकाशीत
भदौ २८ – नागरिकता विधेयक त्यसमा पनि अंगीकृत नागरिकताको बिषयलाई लिएर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । बिदेशी बुहारी र बिदेशी ज्वाईलाई बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने बिषयमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुबीच फरक फरक धारणा आईरहेका छन । यसबीच समितिमा जारी बैठकमा नेपाली कांग्रेसले बिदेशी ज्वाईको पक्षमा आफनो धारणा राखेको छ । कांग्रेसले बिदेशी बुहारीलाई जस्तै बिदेशी ज्वाईलाई पनि नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज बनाउँनु पर्ने माग गरेको छ ।
कांग्रेसले बिदेशी बुहारीले आफनो देशको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पाउँने प्रावधान रहेको र अहिले पनि सोही प्रावधान राख्नु पर्ने बताएको छ । बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समानताको कुरा गरे पनि नागरिकता दिने बिषयमा छोरीलाई भिन्नरुपमा हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भने “बिदेशी ज्वाईलाई किन १५ वर्ष पछि नागरिकता दिने ? अंगीकृत नागरिकता दिँदा समानताको कुरा पनि गर्ने अनि छोरीलाई छुट्टै रुपमा पनि हेर्ने ?” उनले यदि बिवाहको कारण नै जनसंख्या बढेको हो भने सरकारले त्यसको तथ्याङ दिनु पर्ने माग गरे । उनले सरकारले संशोधन विधेयक ल्याए पनि त्यसलाई स्पष्ट पार्न नसकेको टिप्पणी गरे ।